जान्नुहोस् ‘एस’ S बाट नाम सूरु भएका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् - Ektm news
Home›स्वास्थ्य›जान्नुहोस् ‘एस’ S बाट नाम सूरु भएका मानिसहरु कस्ता हुन्छन्
जान्नुहोस् ‘एस’ S बाट नाम सूरु भएका मानिसहरु कस्ता हुन्छन्
अंग्रेजीको १९ औ लेटर ‘एस’ । किताबी ज्ञान बाहेक व्यवहारिक ज्ञानमा पनि ‘एस’ लेटरको महत्व रहेको बताइन्छ । ‘एस’ बाट नाम सूरु हुने मानिसहरु एकदमै मेहनती हुन्छन् । यिनीहरु कुरा गर्न यति सिपालु हुन्छन् कि जोकाहीलाई सजिलै आकर्षित गर्न सक्छन् । जहाँबाट जे ज्ञान मिल्न सक्छ उनीहरु त्यस ज्ञान प्राप्त गरेरै छोड्ने प्रयासमा जारी रहन्छन् । यस लेटरबाट नाम सुरु हुने व्यक्तिहरु प्रभावशाली हुन्छन् ।
आउनुहोस् हेरौ ‘एस’ बाट सुरु हुने व्यक्तिको गुणहरु
‘एस’ लेटरबाट नाम सुरु गरेका व्यक्तिहरुको मन एकदमै सफा हुन्छ । तर, यिनीहरुको रिस कडा हुने हुँदा अरुको नजरमा नराम्रो बन्न पुग्छन् । सत्य तथा आफ्नो सिद्धान्तमा अडिएर जोकोहीसँग यिनीहरु झुक्न चाहादैनन् । आफुलाई श्रेष्ठ सावित गर्न र नेतृत्व लिन ‘एस’ बाट सूरु भएका मानिसहरु ललायित हुने गर्छन् ।
सामाजिक जीवनमा यी व्यक्तिहरु हसिलो व्यवहार गर्ने खालका हुन्छन् । तर, यिनीहरुको बोल्दा प्रस्तुत गर्ने अन्दाजका कारण उनीहरु नराम्रो बन्ने गर्छन् । प्रेमको मामिलामा यिनीहरु लजाउने गर्छन् । यी व्यक्तिहरु धेरै सोच्ने गर्छन् । प्रेम गर्ने कलाको कमी रहन्छ । तर, प्रेममा ईष्या जागेमा यी व्यक्तिहरु माया पाउन बल्ल काम थाल्छन् ।
वैवाहिक जीवनमा यी व्यक्तिहरु आफ्नो बर्चस्व राख्ने काम गर्छन् । मुख्यतया ‘एस’ नामबाट सुरु गरेका महिलाहरु दाम्पत्य जीवनमा अधिक प्रभाव राख्ने खालका हुन्छन् । विवाहका भएका सूरुवाती दिनहरुमा यी महिलाहरु धेरै समस्याहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पूरुषहरुलाई भने विवाह पश्चात धेरै सुख पाउने गर्छन् ।
उनीहरुको मेहनतका कारण धन, भौतिक सुख–सुविधा एवम् मानसम्मान हासिल गर्ने गर्छन् ।यिनीहरुको जीवनमा केही यस्ता समयहरु आउँछन् जहाँ निर्णय लिन कठिन हुन्छ । यिनीहरु साथीहरुसँगको सम्बन्धलाई गम्भिरताका साथ लिने गर्छन् । नेपालीपत्र बाट
२०७२ साल को भुकम्प पछि नया जिबन ...
५ मिनेटमै ढाड दुख्ने र खुट्टा दुख्नेसमस्याबाट ...
महिनावारीका बेला भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी पाँच काम
आयो पुरुषहरुका लागि गर्भनिरोधक सुई, एक पटक लगाएपछि वर्षदिनलाई ढुक्क !
कुनकुन विरामीलाई सेक्सले फाइदा गर्छ !! महत्वपूर्ण कुरा आज थाहा पाउनु होस !
बिदेशमा श्रीमान हुनेले काठमाण्डौमा फेसबुकबाटै किन्न थाले सेक्स टोय 18+ ले मात्र पुरा पढ्नु होस